Wararka Archives - Page 2 of 12 - BaravaNewsBaravaNews | Page 2
You are here: Home / Wararka (page 2)
War Deg Deg ah :
oo caawa kacsan iyo rasaas laga maqlayo waddada Makah-Al-Mukaramah
Madaxa sare ee Arrimaha Dibadda Midowga Yurub
Federica Mogherini oo booqasho ku tagtay Muqdisho
oo diblumaasi Marekanka ah u magacaabay wakiilka QM ee Soomaaliya
Ra'iisul wasaare ku-xigeenka
Soomaaliya oo amar soo saaray
Muxuu salka ku haya go'aanka ay dowladda Soomaaliya
ku mamnuucday diyaaradaha tooska u tagi jiray magaalada Kismaayo?
Saddex Askari iyo qof rayid ah oo lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Somaaliya
Dec 28, 2018 Leave a comment
Wararka naga soo gaaraya gobolka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya in rag hubeysan toogasho ku dileen afar askari oo ka tirsana ciidamada dowladda Soomaaliya iyo qof dumar ah oo ka tirsaneyd dadka degmada
Goobjoogayaal ayaa sheegay in saddexda Askari ee la dilay waqtigaa ku howlanaayeen Uruurinta canshuurta laga qaado ganacsatada degmada halka qofka kale ee dhintay aheyd qof dumar ah oo xaamillo ah.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha amniga degmada Afgooye iyo guud ahaanba maamulka gobolka, hasse ahaatee dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxdii dilka geystay goobta isaga baxsadeen.
Afgooye ayaa ka mid ah meelaha ugu darran oo ay ka dhacaan dilalka, qaraxyada iyo weerarrada ka dhanka ah ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka midowga Africa AMISOM.
Madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed oo si rasmi ah xilka ula wareegay Maanta
Madaxweynaha dhawaan la doortay ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xassan Maxamed Lafta-Gareen ayaa maanta si rasmi ah xilka ula wareegay.
Waxaa xilka ku wareejiyay guddoomiyaha Golaha Shacabka Cabduqaadir Shariif Sheekhuna Miye oo ahaa ku-simaha Madaxweynaha tan iyo markii uu xilkaa iska casilay Shariif Xassan Sheekh Aadan.
Wuxuu sheegay in maanta uu si rasmi ah Xilka ugu wareejiyay xilka madaxweynaha Cabdicasiis Lafta-Gareen oo ku soo baxay codad gaaraya 101 cod.
Kulanka xil wareejinta ayaa waxaa uu ka sheegay Madaxweynaha cusub ee Koofurgalbeed Laftagareen in uu muhiimadda 1-aad uu siin doono Amniga Guud ee deeganada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Munaasabadan ayaa u muuqatay mid kooban marka loo eeg xilwareejinnada noocan oo kale ah oo lagu martiqaado mas’uuliyiin kala duwan.
Inkastoo uu maanta xilka la wareegay ayuusan weli ka hadal Madaxweyne Lafta-Gareen mowqifkiisa ku aadan golaha ay ku mideysan yihiin madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Puntland,Jubbaland iyo Koofur Galbeed.
Maxey ka dhiggan tahay dib -u habeynta lagu sameeyay Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka
Ma’aha oo kaliya guddigan in dib-u-habeyn lagu sameeyay oo kaliya, balse guddoomiyaha ayaa sidoo kale ka dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badanMiisaaniyadda 2019 u horkeenaan Golaha 30/12/2018 si loogu codeeyo.
CECAFA CUP: Soomaaliya oo barbardhac la gashay Eritrea Dec 15, 2019
Soomalaiya waxay ku jirta kaalinta seddaxdaad, waxayna aadi doontaa isreeb-reeb kale.
Mesut Ozil: Arsenal maxay isaga fogeysay hadalkiisa ka dhanka ah Shiinaha? Dec 15, 2019
Arsenal ayaa kooxda ka fogeysay hadal uu sheegay Mesut Ozil oo ku saabsanaa sida dowladda Shiinaha ay ula dhaqmeyso Muslimiinta dalkaas ee Uighur.
Tababaraha xulka Masar ee ay da'doodu ka hoosayso 23 jirka oo doonaya in Salaax uu u dheelo Olympic-ada Nov 30, 2019
Tababaraha xulka Masar ee ay da'doodu ka hoosayso 23 jirka, Shawky Gharib, ayaa doonaya in weerraryahanka kooxda Liverpool Maxamed Salaax uu ka mid noqdo ciyaartoyda da'da weyn ee sanadka soo socda ciyaaraha Olympic-ada xulkiisa u safan doonta.